“လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ခေါငျးဆောငျမှု အခကျြ (၃)ခကျြ” - ONE DAILY MEDIA
ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ လူသားတိုငျးဟာ ခေါငျးဆောငျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျးတှမှော မိမိရဲ့ Team တဈခုကနေ လူပေါငျးမြားစှာအထိ ဦးဆောငျနရေတာ၊ မိသားစု အတှကျဦးဆောငျနရေတာ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ဦးဆောငျနရေတာတှရှေိပါတယျ။
အဲ့ဒီလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နဲ့ အခွားသူမြားကို စိတျခှနျအားတှေ၊ စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးတှေ မြှ​ဝပွေီး မိမိရဲ့ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး တိုးတကျလာဖို့အတှကျ လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ခေါငျးဆောငျမှု အခကျြ (၃) ခကျြကတော့…
(၁) အခကျအခဲတဈခုခု ကွုံတှလေ့ာတဲ့အခါ ပွောဆိုအပွဈတငျတာထကျ အဖွရှောဖို့ကွိုးစားပါ
စိနျချေါမှုတှေ၊ အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှလေ့ာတဲ့အခါ လူတဈယောကျ(သို့မဟုတျ) Team တဈခုလုံး မှားယှငျးကွောငျးပွောဖို့က လှယျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ခေါငျးဆောငျကောငျးတှကေတော့ မိမိ Team member တှကေို ဒီအခွအေနမှေ ကာကှယျဖို့အတှကျ အခွားနညျးလမျးတဈခုခုနဲ့ လုပျနိုငျတာ ဘာရှိမလဲဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျစဉျးစားလို့ရအောငျ အခြိနျပေးတတျကွပါတယျ။
(၂) ကိုယျ့ရဲ့ Team member တှအေကွောငျး ပိုပွီး ကောငျးစှာသိလာပါစေ
Team တဈခုကို ဦးဆောငျတဲ့အခါ ကိုယျ့ Team member တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျကိုသာ စိတျဝငျစားရုံမကဘဲ သူတို့နဲ့ ပတျသကျပွီး သိထားသငျ့တဲ့ အရာတှကေို အမှနျတကယျ နားလညျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျ့ Team member တှေ ဘာကိုတနျဖိုးထားလဲ? သူတို့ ဘာတှစေိတျပူပနျတတျတာရှိလဲ? သူတို့ဘဝမှာ လိုခငျြတာ၊ မြှျောလငျ့တာက ဘာတှလေဲဆိုတာ ကောငျးစှာ သိနားလညျထားရပါလိမျ့မယျ။
(၃) ကိုယျတိုငျရှကေ့နပွေီး ဦးဆောငျလမျးပွလုပျပါ။
ခေါငျးဆောငျကောငျးဆိုတာ သူတို့အရငျက လုပျခဲ့တာ၊ နောငျလညျး ထပျပွီးလုပျဆောငျနိုငျတာကို ပွသရပါတယျ။ တကယျ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးတှဟော ရှကေ့နေ စလုပျပွတယျ၊ လုပျငနျးတှကေို အောငျမွငျအောငျလုပျတယျ၊ အတားအဆီးမှနျသမြှ ကိုယျ့ Team တဈခုလုံးနဲ့ အတူတူ ရငျဆိုငျကြျောလှားတတျကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။
မိတျဆှအေနနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို အောငျမွငျစှာ ခေါငျးဆောငျမှုပွုခငျြတယျဆိုရငျ မိတျဆှမှော “ခေါငျးဆောငျမှု”ဆိုငျရာ အရညျအခငျြးတှတေော့ ရှိထားသငျ့ပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျလိုနယျပယျမှာပဲ အလုပျလုပျကိုငျနပေါစေ အရေးပါတဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုအရညျအခငျြးတှကေို လူတိုငျး နားလညျတတျကြှမျးနိုငျစဖေို့ လိုပါတယျ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားတိုင်းဟာ ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေမှာ မိမိရဲ့ Team တစ်ခုကနေ လူပေါင်းများစွာအထိ ဦးဆောင်နေရတာ၊ မိသားစု အတွက်ဦးဆောင်နေရတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးဆောင်နေရတာတွေရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နဲ့ အခြားသူများကို စိတ်ခွန်အားတွေ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ မျှ​ဝေပြီး မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တိုးတက်လာဖို့အတွက် လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အချက် (၃) ချက်ကတော့…
(၁) အခက်အခဲတစ်ခုခု ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ ပြောဆိုအပြစ်တင်တာထက် အဖြေရှာဖို့ကြိုးစားပါ
စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ လူတစ်ယောက်(သို့မဟုတ်) Team တစ်ခုလုံး မှားယွင်းကြောင်းပြောဖို့က လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတော့ မိမိ Team member တွေကို ဒီအခြေအနေမှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ လုပ်နိုင်တာ ဘာရှိမလဲဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်စဉ်းစားလို့ရအောင် အချိန်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
(၂) ကိုယ့်ရဲ့ Team member တွေအကြောင်း ပိုပြီး ကောင်းစွာသိလာပါစေ
Team တစ်ခုကို ဦးဆောင်တဲ့အခါ ကိုယ့် Team member တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားရုံမကဘဲ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အရာတွေကို အမှန်တကယ် နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့် Team member တွေ ဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲ? သူတို့ ဘာတွေစိတ်ပူပန်တတ်တာရှိလဲ? သူတို့ဘဝမှာ လိုချင်တာ၊ မျှော်လင့်တာက ဘာတွေလဲဆိုတာ ကောင်းစွာ သိနားလည်ထားရပါလိမ့်မယ်။
(၃) ကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီး ဦးဆောင်လမ်းပြလုပ်ပါ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ သူတို့အရင်က လုပ်ခဲ့တာ၊ နောင်လည်း ထပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ပြသရပါတယ်။ တကယ့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ ရှေ့ကနေ စလုပ်ပြတယ်၊ လုပ်ငန်းတွေကို အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်၊ အတားအဆီးမှန်သမျှ ကိုယ့် Team တစ်ခုလုံးနဲ့ အတူတူ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားတတ်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ခေါင်းဆောင်မှုပြုချင်တယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေမှာ “ခေါင်းဆောင်မှု”ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုနယ်ပယ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါစေ အရေးပါတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းတွေကို လူတိုင်း နားလည်တတ်ကျွမ်းနိုင်စေဖို့ လိုပါတယ်။
ဖုနျးအားအမွနျပွညျ့စမေယျ့ နညျးလမျး (၇)ခကျြ